कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. मंगल रावल | सुप्रीम खबर
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. मंगल रावल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले डा. रावललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्त गरेको हो। सिफारिस समितिले डा। रावलसँगै प्रा।डा। रेशम राना र डा। पुजनकुमार रोकायाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
अघिल्लो लेखमाकाठमाडौंमा नेपाल समूहले बनायो समानान्तर कमिटी
अर्को लेखमानेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत महिला अधिकृत पक्राउ